Unyaka ngamnye eRashiya kukho iziqhumiso eziphezulu zobungcali bokunakekelwa kwesikhumba. Kwaye ngo-2015, isitolo se-intanethi seSondo sazisa i-cosmetics yaseKorea yamaMicos, emgceni apho kukho isixhobo esinomdla kakhulu kubanini besikhumba sengxaki - oku kuhlanjululwa kwe-emulsion ye-AC AC Cleaning. Yintoni ekhethekileyo kwaye kutheni iphendulela umbono wakho kwesikhumba sakho?
Ukucocwa kwe-emulsion I- AC AC Ukucoca i sixhobo esiphambili sokususa nokucoca ubuso. Unobumba obumnandi obunomfutho ococekileyo. Ngokuqhelekileyo akaququzeleli imibala kunye nezinto ezinobundlobongela ezifana ne-lauryl sulfates (sls), i-silicones kunye neparabens. Ngako oko, awukwazi ukukhathazeka - i-emulsion ayicasuli isikhumba kwaye ayibangeli ukuphendula. Xa kwakhiwa i-Aroma AC ehlambulukileyo isilinganiselo senziwe kwizithako zendalo ezineempembelelo zokuphefumula , kungekhona nje ukucoca. Ngaloo ndlela, ukubunjwa kubandakanya i- ome ye-thyme, i-chamomile, i-lavender, i-tea tree, i-roses, kunye nezicatshulwa ze-bark yemillow white kunye ne-peppermint . Ngokudibeneyo, abagcini nje ngokucoca ngokufanelekileyo ngesikhumba, kodwa bakhupha ifilimu ekhuselekileyo yokhuseleko, elondla ubusuku bonke - ekuseni uvuka ngesikhumba esiluhlaza. Ukubonakalisa kwimimandla ene-rashes, i-acne, i-acne, ukuhlambulula i-emulsion I-AC Inkcazo yokuCoca ikhupha isikhumba, iyalungelelanisa ukulinganisela kwamanqwanqwa yamanzi, inciphisa ukutshaya nokunciphisa ubomvu.
Impembelelo ebalulekileyo yokubonakalayo ifumaneka emva kweveki ezimbini zokusetyenziswa. Khawucinge nje, ukuba iminyaka ujongane neengxaki zesikhumba "ulutsha" kwaye uzibale ngabo ngexesha elifutshane ... Ngaba kunokwenzeka ukuba uphelelwe ithuba? Khangela izibuyekezo malunga nale sixhobo ngoku! I-AC AC Cleaning will show you what your face can be:
ukungabikho kwamanqatha amafutha;
ngaphandle kwendawo yeendawo yokuvuvukala.
Kubaluleke kakhulu: phantse zonke iimveliso ezivela kwi-brand Micos ziisampulu zeemveliso zendalo, oko kukuthi, zingasetyenziswa ukuphathwa kwesikhumba nokubuyisela ukusikeka kwayo kwendalo.
Imveliso isetyenziswa kakhulu kwezoqoqosho, enye ibhotile ye-emulsion iya kuhlala iinyanga ezintandathu. Ngaba unempembelelo ephuculweyo kwesikhumba xa idibaniswe kunye nomlingane ovela kumgca ofanayo -Roman AC Fluid.
Kuye kwenziwa iimvavanyo ezininzi zomsebenzisi: abafazi bahlambulula ubuso kunye ne-emulsion kunye nepotton pad, eyashiya inani elininzi lokungcola (isiseko, izithunzi, inkcazelo) iindleko zezilumkiso. Oku kuthetha enye kuphela i-Roma AC Ukucoca ihlambulule ngokupheleleyo isikhumba, ukuze iziqhumiso zingeneli kwii-pores kunye ne-remedy. Ngokwahlukileyo kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngokusetyenziswa kwansuku zonke le mulsion iyanciphisa ama-pores kwaye iphelise ii-comedones! Ukuba usuvele ukhathele yimfazwe engaphumelelanga nesikhumba sakho, okufana nokulwa nemimoya yomoya, - khetha ikhambi elixazulula ingxaki kanye kanye. I-AC Icoceko ye-AC yintshintsho, kodwa ingenakuguquka kwesikhumba sakho! Ukucocwa kwe-emulsion I-AC AC Ukucoca kunokuthengwa kuphela kwisitolo se- intanethi saseSeondo , esiye safumana eMzantsi Korea ithuba lokuba ngummeli kuphela omele ummeli kwintsimi yaseRashiya.
Iinkqubo zokunyamekela isikhumba
I-Blepharoplasty yenye yezona zinto ziqhelekileyo ebusweni
I-Salad ye-Chicken Ragged
Imveliso eyona nto ibalulekileyo malunga ne-oncology
Imiqulu ye lasagna